SAGAAL xiddig Manchester City
Weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero ayaa seegay kulankii FA Cup ee Axadii ay ka badiyeen Birmingham ka dib markii laga reebay kooxda.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentine, oo la filayay inuu ku soo bilowdo ka dib waqti dheer oo dhanka ah, ayaa la karantiilay inkasta oo laga baaray viruska.
Aguero wuxuu ku sugnaa Manchester City, iyo sidoo kale guri wada jir ah iyadoo la raacayo tilmaamaha ka soo baxay dowladda Ingiriiska ee ah in dadka la galiyo tuhun xanuun, waxaana jiri doona muddo toban maalmood ah, taasoo la micno ah inuu seegi doono kulamada kooxdiisa.
32 jirka wuxuu la xiriiray qof qaba cudurka sidaa darteedna waa la karantiilayaa xitaa haddii aan la ogaan.
Nasiib darro, wuxuu ku jiraa karantiil, ”ayuu yiri tababare Pep Guardiola. Wuxuu la xiriiray qof qaba cudurka. Taasi waa wax xun. Waxay noqon laheyd daqiiqado fiican (kulankii Birmingham) laakiin nasiib daro wuxuu maqnaan doonaa maalmo kooban. “
Intii lagu jiray toban maalmood ee karantiil, Aguero ayaa seegi doona laba kulan oo Premier League ah oo ay kooxdiisu u baahnayd inay ku hesho adeegyadooda goolhaye iyo khibraddooda.
Midkoodna kulamada Manchester City ee Brighton iyo Crystal Palace lama ciyaari doono, taasoo ka dhigeysa inuu noqonayo laacibkii 9-aad ee kooxda koowaad ee Manchester City ah oo garoomada ka maqnaada saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay.
for the Congolese Labor Party